Zinathi Mgwebi, 16 yrs ubudala, oyi peer educator, Iqhayiya High School e Khayelitsha | Rape Crisis Cape Town Blog
Zinathi Mgwebi, 16 yrs ubudala, oyi peer educator, Iqhayiya High School e Khayelitsha
Posted on July 10, 2013 by rapecrisisblog
Phambi kwe peer educators training, zithini izimvo zakho ngodlwengulo?
Udlwengulo bendicinga ukuba yinto osuka uyenze nje xa ufuna ukuyenza, okanye kukuzithathela emzimbeni ongengowakho ngenkani. Loo nto ibindenza ndoyike kakhulu ngoba awuwazi noba ungadibana nomntu ongutata asuke akuhlukumeze. Ingakumbi kulemihla yangoku abantu abango mama bahlukunyezwa kakhulu bangama xhoba abantu abangotata kuphinde baba bulale ibebuhlungu leyo ngoba lamama ushiya abantwana abancinci.
Ngethuba lwe mfundo, zitshintshe njani izimvo zakho?
Ekubeni ndifumene ithuba lokutrainer kwa Rape Crisis, ndifunde into elungileyo kakhulu ngoba bendicing ukuba irape kuku suka uzithathele emntwini ongumama okanye noba ngubani na. Lonto indenze ndayijonga ngoba ezilokishini yinto exhaphakileyo kakhulu.
Kuphinde ndifunde kabanzi ngodlwengulo lo nto indenze ukuba ndifumane kabanzi ngoku trainwer ngu Rape Crisis ngoba yinto elungileyo nakubani na olixhoba lo dlwengulo kubalulekile kakhulu ukufunda ngento ubu nga yikhathalelanga ngoba ukufundisa nzulu na kabanzi. Ezitalatweni zininzi izinto ezenzekayo njengale iyi rape.
Ekubeni ndifundiswe apha ndibone ukuba indlela ebalulekileyo ukwazi kwezinto yindlela elungileyo kakhulu, ngoba ndifunde ezinye izinto ebendingazazi kwakunye odibana nazo ekuhlaleni nakunye nase bomini lonto ithi ziqaphele izinto ezenzekayo apha ekuhlaleni nakunye nasezilokishini. Kuphinde indlela ebalulekileyo ukunceda umntu ehlukunyeziwe nakunye nokuncenda abantu ezilokishini, ezikolweni, nakwezinye indawo zonke apha emzantsi Afrika. Iphinde lonto ibonisa ukuba singabantu nje sihoyene njanina ngoba ubuntu balapha emzantsi. Yandifundisa ukuba thina singa bantu base tyhini singamaxhoba abangotata kuphinde, asikwazi kuzilwela ngoba singana mandla amakhulu kodwa ngoku ndingakwazi ukuzilwela ngoba ndifundiswe ndibenento ethi akusoze kuphinde kubekho into efuna ukuhlukumeza, abantu abango mama nam ngoba ndifundisiwe ukulwa nabantu abaxhaphaza amalungelo omama okanye nelomphina umntu ilingelo.
Ufunde ntoni kwi Birds and Bees camp?
Ndifunde ukuba udibene nezinto ezinzima kufuneka uzinyamezele ngoba akukho mntu ongabethekiyo kwezizinto zinzima, nendlela yokuncenda umntu olixhoba nendlela zokuthetha nabantu. Lonto kum ithetha into entle, nendlela yokuziphatha. Umntu olixhobo neendlela zoku thetha nabantu. Lonto kum i thetho izinto ezintle.
Kuphinde indlela yokuziphatha xa uphumile ukulondawo inabantu ongabaqhelaga nakunye namaqela obekwe nawo apha ekhempini. Nendlela zokuziphatha ngoba akufunekanga uziphathe ngokwendlavini okanye uziphakamise ebantwini kufuneka uthethe nabantu bonke abakwaziyo no ngabaziyo, okubalulekileyo xa uhlelinabantu bonakalisa indlela oqeqeshwe ngayo kowenu lonto ibalulekile kakhulu.
Uzakulisebenzisa njani ulwazi lwakho olutsha?
Ndizakulisebenenzisa kum nakubanye abantu abafuna ucendo xa beku longxaki bakuyo ngoba ndifundisiwe ukuba mandi ncedise abantu abakulengxaki bakuyo nakunye nokucedisa ukususa ubundlobongela ezilokishini esikuzo ngoba yinto efunekayo leyo. Okunye xa umntu esengxakini ndingamhleki ngoba ayibobuntu obo. Ubuntu kufuneka uzibonakalise indlela oyiyo xa ufuna ukuzibona kalisa into ofunde ngayo kufuneka ububonakalise kulondawo uhlala kuyo. Na xa kwenzeke lonto elokishini kufuneka ubusebenzise ubuchule bakho okanye into ofundengayo ngobuchule. Ngokwenjenjalo uyakuba uncedisana nokulwa kokudlwengulwa kwa bantu ababhinqiley.
One thought on “Zinathi Mgwebi, 16 yrs ubudala, oyi peer educator, Iqhayiya High School e Khayelitsha”
kholwakazi on August 14, 2013 at 3:33 pm said:
lot of gr8 things we’ve learnt and discovered thina apha.keep up the good work.